टिकाले मा’इ’तीमा आएर प्रा ‘ण त्या’गेपछि बाबु आमाले भ’क्का’निँदै खो’ले ज्वा’ईका यस्ता र’ह’स्य ! - Public 24Khabar
Home News टिकाले मा’इ’तीमा आएर प्रा ‘ण त्या’गेपछि बाबु आमाले भ’क्का’निँदै खो’ले ज्वा’ईका यस्ता...
टिकाले मा’इ’तीमा आएर प्रा ‘ण त्या’गेपछि बाबु आमाले भ’क्का’निँदै खो’ले ज्वा’ईका यस्ता र’ह’स्य !
यिनको नाम हो रिदम क्षेत्री जसले महिनामा टिकटकमै लाइभ बसेर २ लाख भन्दा बढी कमाएका छन् र भब्य पार्टी दिएका छन् | संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख-सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वै’ध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् ।
कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छन् ।संसारमा अवै”ध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने सुख होइन, तनाव मात्रै दिने गरेको छ । किनभने उ एकदिन फ’स्छ, फ’स्छ ।
नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका नागरिकको सोचाई हुन्छ,- आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउँ, आफ्नो एउटा सानो घर होस् र परेको बेला खर्च पनि गर्ने पैसा होस् । मोनिटाइज भएका अकाउन्टमा राखिएको कन्टेन्टमा विज्ञापन आउने र त्यसवापत सम्बन्धित टिकटकका अकाउन्ट सञ्चालकले रकम पाउने छन् ।
Previous articleसुजन कहिले श्री’मतीको हातको खाना खान घर फर्किने छैनन् : घरबाट निस्किएको दश मिनेटमै मृ’त्यु
Next articleप्रह’रीको असईले अदा’लत भित्रै कर्मचारी महिलाको ह, त्या गरेर यस्तो ठाउमा फालेका रहेछन….